शृंखला खतिवडा पुगिन टप १२ मा, मिसवल्डको फाईनल जारी लाईभ भिडियो यहाँ हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > शृंखला खतिवडा पुगिन टप १२ मा, मिसवल्डको फाईनल जारी लाईभ भिडियो यहाँ हेर्नुहोस
काठमाडौँ । मिस शृङ्खला खतिवडा मिस वर्ल्डको शीर्ष १२ मा पुग्न सफल भएकी छिन् ।चीनको सान्यामा जारी मिस वर्ल्डको फाइनलमा टप १२ मा पुग्न सफल भएकी हुन् । योसँगै उनले मिस वर्ल्डसँगै मिस वर्ल्ड एसिया–ओसियानाको उपाधि जित्ने सम्भावना कायम राखेकी छिन् ।
मिस नेपाल शृङ्खलासँगै एसिया ओसियानिया क्षेत्रबाट मिस न्युजिल्याण्ड र मिस थाइल्याण्ड पनि शीर्ष १२ मा पुगेका छन् ।तीन सुन्दरीमध्ये एकले इन्टरकन्टिनेन्टल उपाधि मिस वर्ल्ड एसिया–ओसियानियाको उपाधि जित्नेछन्
लाईभ यहाँ हेर्नुहोस:
मिस वर्ल्डको फाइनलको लाइभ प्रसारण मिस वर्ल्डको अफिसियल वेबसाइटमार्फत हुनेछ । यसबाहेक भारतीय टेलिभिजन च्यानल ‘रोमेडी नाव’ मा पनि लाइभ हेर्न सकिनेछ । मिस वर्ल्डको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि फाइनलको लाइभ अपडेट हेर्न सकिनेछ । मिस वर्ल्डको अफिसियल वेबसाइटमार्फत लाइभ हेर्न १ डलर तिर्नुपर्नेछ । यो १ डलर लाइभ प्रसारणको क्रममा प्रतियोगीलाई भोट गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
यसरी गरिने भोट प्रत्येक देशबाट गरिएको भोट बराबर १ भोट गनिनेछ । अर्थात भोटको गणना कति जनाको भोट आयो भनेर भन्दा पनि कति फरक फरक देशबाट भोट आयो भन्ने आधारमा हुनेछ । नेपाली सुन्दरी श्रृंखलाले आफूलाई भोट गरिदिन विश्वभर छरिएका नेपालीहरुसँग आग्रह गरेकी छिन् । यो भोटले उनलाई पिपुल्स च्वाइस अवार्ड जित्न सघाउनेछ ।
मिस वल्डमा पक्षपात भयो भन्दै पुर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले सामाजिक संजालमा यस्तो लेखिन
फेरि राजा आउदै ? भर्खरै बुटवलमा जनता सबै निस्किए …
पशुपतीमै यस्तो ध’न्दा ? भारतीय भट्टको पोल खोल्ने ड’रले निकाल्न खोजेकाे खुलाशा (भिडियो)